MIN AUNG HLAING NAU LE PAWL CEILAK AN THAH TTHAN HNA – The Chinlung Post
Ralhrang kawlralkap an sung tthan. Moe Pyae ralhrang kawlralkap sakhan tukdohnak ah ralhrang kawlralkap lei in minung 14 nak tlawmlo an nunnak aliam pin ah minung pali an tleih rih hna. Tuni May thla 23 chun suimilam 12 le cheu hrawng ah Mipi lei PDF le minlangh ter lo mi tlang cung hriamtlai phu (EAO) hna I fonh in Shan ram Moe Pyae ralkap sakhan cu hriamnam tling in an an kah doh hna.
Kawlca in tlamtling tein rel aduh mi caah းဗြဲရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင် ရဲ ၁၄ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး ၄ ဦး အဖမ်းခံရ. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းတပ်က မိုးဗြဲရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သော တိုက်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ရဲ ၁၄ ဦးသေဆုံးပြီး လေးဦးဖမ်းဆီးခံထားရသည်။ နေပြည်တော် စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်သည့် ပူးပေါင်းတပ်များက လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် မိုးဗြဲရှိ ရဲစခန်းကို နေ့လည် ၁၂နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပွဲကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ရဲစခန်း မီးလောင်ပြာကျသွားပြီး အသက်ရှင်ကျန်သော ရဲများ လက်နက်ချအဖမ်းခံကြသည်။ အချို့သော သတင်းများတွင် သေဆုံးသော ရဲအရေအတွက် ၁၅ ဦးရှိသည်ဟုဆိုသည်။
ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် အမည်မဖော်ပြထားသော ဒေသတွင်းနဂိုမူလကရှိထားပြီးသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ် (EAO)နှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု (PKPF) က ထုတ်ပြန်သည်။ PKPF သည် အစောပိုင်းကတည်းက ကယားပြည်နယ်အတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုများ ဦးဆောင်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူငယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစုစည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အာဏာအလုခံရသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရလက်ထက် ပြည်နယ်အတွင်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်စိုက်ထူမှုကို ကန့်ကွက်ခဲ့ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်သော လူငယ်များပါဝင်သည်။
မိုးဗြဲမြို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်နယ်စပ်မှာတည်ရှိကာ ကယားပြည်နယ်မြို့တော်လွိုင်ကော်နှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင် စခန်းရှိရဲအရေအတွက်နှင့် တခြားသော သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရမှုအရေအတွက်တို့ကို သဲသဲကွဲကွဲမသိရသေးပါ။ သို့သော် ဒေသတွင်းမှလာသော ကနဦးသတင်းများအရ ကာကွယ်ရေးတပ်များက လက်နက်အများအပြားလည်း သိမ်းရခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်းရှိ စံပြ (၆) မိုင်အနီးနှင့် လွိုင်ကော် ပန်ကန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဘက်တွင်လည်း ဒေသခံ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်များ ပစ်ခတ်မှုများရှိနေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ ထို့အပြင် စစ်လေယာဉ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာ ဒေသပေါ်တွင် ဝဲပျံနေသည်ဟုလည်း သိရသည်။
အထိနာနေသော စစ်ကောင်စီတပ်များအတွက် စစ်ကူအဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံဘက်မှချီတက်လာနေမှုရှိသည်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသော ဒေသခံတစ်ဦးက သူ၏ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်ရေးသားသည်။ မိုးဗြဲရှိ လူနေရပ်ကွက်အချို့တွင် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ကတည်းက သေနတ်သံ၊ ပေါက်ကွဲသံများကြားနေခဲ့ရသည်ဟု ဒေသခံများ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အစောပိုင်းရက်များကလည်း မိုးဗြဲရဲစခန်းနားက ဒေသခံများအနေဖြင့် သေနတ်သံ၊ ဗုံးသံများကြားနေခဲ့ကြရသည်။ အလားတူပင် ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်များ၏တိုက်ပွဲများ နေရာအတော်များများတွင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများကြောင့် ဒေါသထွက်နေသော လူငယ်များက စစ်ပညာများ နီးစပ်ရာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များထံမှသင်ယူကြပြီး ၎င်းတို့နယ်ခံဒေသများတွင် ကာကွယ်ရေးတပ်များအဖြစ် ဖွဲ့စည်းကာ တိုက်ပွဲများဆင်နွှဲလာခဲ့ကြသည်။